कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी हरुलाई एका बिहानै दियो यस्तो अत्यन्तै जरुरी सूचना ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी हरुलाई एका बिहानै दियो यस्तो अत्यन्तै जरुरी सूचना !
कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी हरुलाई एका बिहानै दियो यस्तो अत्यन्तै जरुरी सूचना !
कक्षा १२ को ग्रेडवृद्दि परीक्षा पनि २०७७ सालको कक्षा १२ को परिक्षार्थीहरुसङ्गै संचालन हुने भएको हुँदा फारम भर्नको लागि आ-आफ्नो कलेजमा सम्पर्क गर्नुसक्नु हुने छ ।फारम भर्ने मिति विलम्ब शुल्क सहित चैत्र १५ गतेसम्म मात्र रहेको छ । त्यो मिती भित्र फारम भरिसक्न NEB ले आग्रह गरेको हो ।
काठमाडौं। एक युवकले रिसाएर गएकी प्रेमिकालाई फकाउनको लागि लाखौं खर्च गरेर आफ्नो बगैंचालाई नै लभ आइल्याण्डमा परिणत गरे । तर, यति गर्दा पनि उनकी प्रेमिका भने प्रभावित भइनन् । तर, ती युवकले अझै पनि प्रेमिकाको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । यद्यपि ३० वर्षका यी युवकको मेहनत खेर भने गएन । अब यो लभ आइल्याण्डमा अन्य प्रेमी जोडीहरु घुम्नको लागि आउन थालेका छन् ।जु थर भएका यी व्यक्तिले १ लाख युआन (१८ लाख रुपैयाँ) खर्च गरेर आफेनो बगैंचालाई नयाँ रुप दिएका हुन् ।
यो पूरै आइल्याण्डलाई गुलाबी वनस्पतिले ढाकिएको छ । यो आइल्याण्डको घाँस पनि गुलाबी रंगको छ । यहाँ कैयौं चेरीका रुखहरु पनि छन् । यसका अलावा यी व्यक्तिले यो रोमान्टिक स्पटसम्म जानको लागि एउटा पुल पनि बनाएका छन् ।
अक्षयले छाडे सय करोड पारिश्रमिक लिएको चलचित्र